Ciidan careysan oo maanta qabsaday waddo MUHIIM u ah Beledweyne iyo rasaas... - Caasimada Online
Home Warar Ciidan careysan oo maanta qabsaday waddo MUHIIM u ah Beledweyne iyo rasaas…
Ciidan careysan oo maanta qabsaday waddo MUHIIM u ah Beledweyne iyo rasaas…
Beledweyn (Caasimada Online) – Ciidamo ka tirsan kuwa booliska oo careysan ayaa maanta xiray waddada ugu muhiimsan isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha ee magaalada Baledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Dadka deegaanka ayaa Caasimada Online u sheegay in ciidamadaan oo ah kuwa aad u careysan ay rasaas ku kala ceyrinayaan dadka iyo gaadiidka isticmaalaya waddada laamiga ah ee halbowlaha u ah isku socodka guud ee magaalada Baledweyne.
Sida wararka sheegayaan, ciidamadaan ayaa ka gadoodsan mushaar la’aan soo wajahday bilooyinkii ugu dambeeyey taasoo keentay inay maanta ku dhaqaaqaan tallaabadaan.
Maamulka Gobolka Hiiraan weli kama uusan hadlin falka ay ku dhaqaaqeen ciidamada Booliska, waxaana dhowr jeer oo hore lagu eedeeyey maamulka inay musuq-maasuqaan lacagaha canshuuraha ee laga qaado Beledweyne.
Ma ahan markii ugu horeysay oo ay ciidamo ka tirsan kuwa HirShabeelle ay xirteen isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha magaalada Baledweyne, iyaga oo ka cabanaya Mushaar la’aan heyso.
Magaalada Beledweyne ayaa waxaa dhawaan qabsaday ciidamo ka tirsan kuwa Militariga oo sheegay inay kasoo horjeedaan qaabka awood qeybsiga Maamulka Hirshabelle iyo in madaxweyne Guudlaawe uu yimaado Magaalada inkastoo markii dambe xal laga gaaray.